အခမဲ့ Vimeo Downloader - Vimeo ဗွီဒီယိုများကိုကလစ်အနည်းငယ်ဖြင့်သိမ်းဆည်းပါ
သငျသညျအဟောင်းဗားရှင်းကိုအသုံးပြုနေသည်။ နောက်ဆုံးပေါ်မူကွဲကိုထည့်သွင်းရန်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ 4.2.2
အခမဲ့ Vimeo Downloader
➶ ဒီ site သည်ဗီဒီယို URL ရိုက်ထည့်ခြင်းဖြင့်မည်သည့် Vimeo ဗီဒီယိုကိုမဆို download ပြုလုပ်နိုင်စေသည်။
ဗွီဒီယို URL ကိုကူးယူပြီးအထက်တွင်ထည့်ပါ။ ထို့နောက် Vimeo downloader သည်ဗွီဒီယိုကိုချက်ချင်းတွေ့လိမ့်မည်။ download link ပေါ်တွင်ညာဖက်နှိပ်ပြီး Vimeo ဗွီဒီယိုများကို local disk သို့သိမ်းပါ။
download ဖိုင်မရှိပါ Browser extension ကို install လုပ်ပါ။
ရိုးရှင်းသော Vimeo Downloader
ဒီ extension က Vimeo player ထဲကို download ခလုတ်ကိုထိုးသွင်းခြင်းအားဖြင့် Vimeo မှဗီဒီယိုကိုဒေါင်းလုတ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ➥ ယခုသွင်းပါ
Media Download Helper ကို Install လုပ်ပါ
Vimeo တွင်သီးသန့်ဗီဒီယိုတစ်ခုကိုကူးယူ။ တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်သောဗွီဒီယိုကိုမှတ်တမ်းတင်ရန်ကူညီပါ။ ၀ ဘ်ဆိုဒ်အများစုကိုထောက်ပံ့ပါ။ ➥ ယခုသွင်းပါ
မြှုပ်ထားသောဗွီဒီယိုများကိုတိုက်ရိုက် Download လုပ်နည်း။
ရွေးချယ်ပါ “Save video as”
ဖုန်းသို့ QR ကုဒ်ဖြင့်ကူးပါ
ဒီ Vimeo ဗွီဒီယို Download Tool ၏အကျိုးကျေးဇူးများ
Playlists, Channels, Likes, နောက်ပိုင်းမှစောင့်ကြည့်ပါ၊ Collections များမှအကန့်အသတ်မရှိ Vimeo ဗီဒီယိုများကို download လုပ်ပါ။
☀ Vimeo ရုပ်ရှင်များကိုဒေါင်းလုတ်လုပ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိရိယာသည်အင်တာနက်ကိုမလိုအပ်ဘဲစက်အမျိုးမျိုးသို့လွှဲပြောင်း။ ဗီဒီယိုကိုသယ်ဆောင်နိုင်သည်။
☀ အဆုံးမဲ့နာရီကြားခံခြင်းနှင့်တင်ခြင်းဖယ်ရှားခြင်း! ဗွီဒီယိုကိုအနှောင့်အယှက်မရှိကြိုတင်ကြည့်ရှုပြီးကြည့်လို့ရပါတယ် (ခေတ္တနားပြီးခေတ္တနားလို့ရပါတယ်)
☀ ဗွီဒီယိုများ၊ ရုပ်ရှင်များနှင့်တီဗွီအစီအစဉ်များကိုသင်လိုချင်သလောက်များပြားစွာပြန်လည်နေရာချထားနိုင်သည်။
☀ တီဗွီအစီအစဉ်မှဖြစ်စဉ်များသည်ဆာဗာမှပယ်ဖျက်ခံလိုက်ရသည့်အကြိမ်များစွာဖြစ်သည်။ ဆာဗာမှဖယ်ရှားခြင်းမခံရမီဖြစ်စဉ်ကိုသင် download ဆွဲပါက၎င်းသည်သင်၏စုဆောင်းမှုအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာသည်။
Vimeo သည် HD ဗွီဒီယိုများကိုအခမဲ့ကြည့်ရှုရန်၊ မျှဝေရန်နှင့်တင်ရန်အတွက်အကောင်းဆုံးသော site ဖြစ်သည်။ အမျိုးအစားနှင့်ချန်နယ်များကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်သင်စိတ်ဝင်စားသောအရာများကိုရှာဖွေနိုင်သည်။ Vimeo Plus သို့မဟုတ် Pro အကောင့်ရပြီးသောအခါပိုမိုကောင်းမွန်သော ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်အကျိုးကျေးဇူးများပိုမိုခံစားနိုင်သည်။
အိုင်ကွန်ကိုထိပါ ⁝ ဒါမှမဟုတ် …
အိုင်ကွန်ကိုထိပါ ☆ ဒါမှမဟုတ် ♡
နှိပ်ပါ Shift+Ctrl+D. Mac OS X ကိုသုံးလျှင်, နှိပ်ပါ Shift+⌘+D
⤓ ဒေါင်းလုပ် fbion.com ← ဤအရာကိုသင်၏အမှတ်အသားပြုဘားသို့ဆွဲချပါ
Bookmarks ဘားကိုမမြင်ရလား နှိပ်ပါ Shift+Ctrl+B
Mac OS X ကိုသုံးလျှင်, နှိပ်ပါ Shift+⌘+B
သို့မဟုတ်စာသားအကွက်အောက်ရှိကုဒ်အားလုံးကိုကူးယူပြီးသင်၏ Bookmark ဘားသို့ကူးထည့်ပါ။
Vimeo အတွက်ဗီဒီယို Downloader
အဆင့်မြင့်သော Vimeo ဗီဒီယိုကို download လုပ်ပါ
Vimeo မှအွန်လိုင်းမှဗွီဒီယိုများကိုကူးယူပြီးသောအခါ၊ ဗွီဒီယိုအရည်အသွေးစစ်ဆေးရန်၎င်းတို့ကိုဖွင့်ပါ။ သင်ဒေါင်းလုပ်လုပ်ထားသောဗီဒီယိုများသည်အွန်လိုင်းမူရင်းနှင့်အတူတူအရည်အသွေးတူသည်ကိုသင်စိတ်ချနိုင်သည်။
ရှာဖွေရေးဘားတွင်သော့ချက်စာလုံးများကိုရိုက်ပါ၊ သက်ဆိုင်သည့် Vimeo ဗီဒီယိုပေါ်လာလိမ့်မည်။ ဤရိုးရှင်းသောကိရိယာများဖြင့်အော့ဖ်လိုင်းအသုံးပြုရန်သင်အကြိုက်ဆုံး Vimeo ဗီဒီယိုများကိုသိမ်းဆည်းပါ။
သင့်အနေဖြင့်အခကြေးငွေပေးဆောင်ရန်၊ စာရင်းသွင်းရန်သို့မဟုတ်ပရိုဂရမ်အပိုထပ်ထည့်ရန်တောင်းဆိုလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ popup မရှိ၊ virus မရှိပါ၊ site သည်လုံးဝသန့်ရှင်းသည်။
မည်သည့် browser တွင်မဆိုချောချောမွေ့မွေ့အလုပ်လုပ်ပါ
Vimeo Downloader သည် Google Chrome, Firefox, IE, Opera, Safari, Microsoft Edge, UC Browser နှင့်မည်သည့် web browser များတွင်မဆိုကောင်းစွာအလုပ်လုပ်သည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည် Mac operating system နှင့်အလွန်အဆင်ပြေသည်။
Vimeo သည်လူသိများသောကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိဗီဒီယို hosting ဖြစ်ပြီးဖန်တီးမှုရှိသူများအတွက်ရည်ရွယ်သည်။ လူများသည်ဗွီဒီယိုများကို တင်၍ မျှဝေနိုင်သည်။ ယခုတွင် Vimeo မှဗွီဒီယိုများကိုဒေါင်းလုတ်လုပ်ရန်ပိုမိုလွယ်ကူပြီး vimeo downloader ဖြင့်သင်အကြိုက်ဆုံး HD နှင့် SD အရည်အသွေးကိုရွေးချယ်ပါ။ Vimeo ဗွီဒီယိုကို mp4 သို့မဟုတ် mp3 ဖိုင်ပုံစံသို့လည်းသိမ်းဆည်းနိုင်သည်။ အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့အဆင့်တွေကိုလိုက်လုပ်ပြီးကိုယ်ပိုင်စုဆောင်းမှုကိုအော့ဖ်လိုင်းဖန်တီးပါ။
ဤ website ကိုဖွင့်ပါ
Vimeo ဗီဒီယို၏ URL ကိုရိုက်ထည့်ပြီး Download ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။
သန်း ၇၀ ကျော်သောလူများသည်ကမ္ဘာကြီးနှင့်မျှဝေရန်အတွက် Vimeo တွင်အဆင့်မြင့်သောဗီဒီယိုများတင်ရန်ရွေးချယ်ကြသည်။ အကယ်၍ သင် Vimeo ကိုနှစ်သက်သည်ဆိုပါက Vimeo Video Downloader သည်၎င်း၏တိုတောင်းသောရုပ်ရှင်နှင့်ရုပ်ရှင်များကိုအွန်လိုင်းတွင်ဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်သင်၏အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်နိုင်သည်။ ဒီအံ့သြဖွယ်ကောင်းတဲ့ downloader ကသင့်ကို Vimeo မှ MP4 သို့ 720p, 1080p, 2K, 4K ကဲ့သို့အရည်အသွေးမြင့်မားစွာသိမ်းဆည်းထားနိုင်သည်။ ဆုံးဖြတ်ချက်အားလုံးသည်သင်၏ ဦး စားပေးမှုအပေါ်အခြေခံသည်။ ဟုတ်ပါတယ်, အရည်အသွေးမြင့်မားပိုကောင်းတဲ့ရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင်ဒီ downloader ၏ download service အားလုံးသည် ၁၀၀% အခမဲ့ဖြစ်သည်။ ကြိုးစားကြည့်ရအောင်!
ထောက်ပံ့ပေးထားသော URL များ
သင်၏မေးခွန်းများနှင့်အဖြေများကိုဤနေရာတွင်ရှာပါ။ Vimeo ဗွီဒီယိုကိုသင်၏ကွန်ပျူတာသို့မည်သို့သိမ်းဆည်းရမည်နည်း။
+ Vimeo Video Downloader ဆိုတာဘာလဲ။
Vimeo Video Downloader သည်ဗီဒီယိုမှသင်၏ကွန်ပျူတာသို့ဗွီဒီယိုများကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်အွန်လိုင်းကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ Vimeo Video Downloader ကို အသုံးပြု၍ မည်သည့် vimeo ဗီဒီယိုကိုမဆိုအရည်အသွေးမြင့် MP4 ပုံစံဖြင့်ဒေါင်းလုပ်ဆွဲနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ downloader သည် vimeo ဗွီဒီယိုလင့်များကိုထုတ်ယူပြီးသင်ဗွီဒီယိုကိုတိုက်ရိုက်ကူးယူနိုင်သည်။ အသုံးပြုရလွယ်ကူပြီးလုံးဝအခမဲ့ဖြစ်သည်။
+ Vimeo Video Downloader သည်မိုဘိုင်းဖုန်းတွင်အလုပ်လုပ်ပါသလား။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကိရိယာသည်ဝဘ်အခြေပြုကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ လူတွေကမိုဘိုင်းပစ္စည်းတွေအပါအ ၀ င်သူတို့နှစ်သက်တဲ့ဘယ် browser ကိုမဆိုအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပြီးဘယ် operating system ဒါမှမဟုတ် device ကိုမဆိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကိရိယာမှဒေါင်းလုပ်လုပ်ထားသောဗွီဒီယိုများနှင့်ရုပ်ရှင်များသည်သင်၏မူလ download ဖိုင်တွဲအဖြစ်သတ်မှတ်ထားသည့်မည်သည့်ဖိုင်တွဲတွင်မဆိုပါ။ သင်ကြိုက်နှစ်သက်သည့်မည်သည့် drive ကိုမဆို folder ကိုသင်ရွှေ့နိုင်သည်။
+ ဒီကိရိယာကကျွန်ုပ် download လုပ်ထားသောဖိုင်မိတ္တူကိုသိမ်းသလား။
Vimeo Downloader သည်သင်၏ downloads များကိုမိတ္တူကူး။ ဆာဗာများပေါ်တွင်မထားရှိပါ။
ရုပ်ရှင်တစ်ခုသို့မဟုတ်ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ကိုသင်၏စက်ထဲသို့ဒေါင်းလုပ်ချပြီးပြီဆိုလျှင်သင်သိမ်းထားခြင်းသည်သင့်အတွက်ဖြစ်သည်။ မည်သည့်ကြော်ငြာပြတ်တောက်ခြင်းသို့မဟုတ်ကြားခံကြားခံခြင်းမရှိဘဲသင်ကြည့်လိုသည်များကိုအကြိမ်ပေါင်းများစွာကြည့်နိုင်သည်။ သင်ကြည့်ရှုနိုင်သည့်အကြိမ်အရေအတွက်ကန့်သတ်ချက်မရှိပါ။
+ ဒေါင်းလုပ်လုပ်ထားတဲ့ဖိုင်ထဲမှာ adware ရှိသလား။
ဒေါင်းလုပ်လုပ်ထားသောဖိုင်တွင် adware နှင့် malware မရှိပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဆာဗာများသည်လုံခြုံစိတ်ချရပြီးကျွန်ုပ်တို့၏သုံးစွဲသူများအားလုံခြုံသောလင့်ခ်တစ်ခုပေးသည်။
ဟုတ်ပါတယ်၊ ၎င်းသည် Vimeo ဗွီဒီယိုကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ Vimeo Downloader နှင့် ပတ်သက်၍ အကောင်းဆုံးသောအရာများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင် download လုပ်ထားသောဗွီဒီယိုများကိုအခြားကိရိယာများနှင့်အခြားလူများနှင့်မျှဝေနိုင်သည်။
+ Android သို့မဟုတ် Iphone, Ipad တွင် Vimeo ဗီဒီယိုလင့်ခ်ကိုမည်သို့ရယူရမည်နည်း။
ဘရောက်ဇာကိုအသုံးပြုပါကဗွီဒီယိုကိုအသာပုတ်။ ကိုင်ထားပါ၊ ပေါ်လာသည့်မီနူးမှကူးယူခြင်း (သို့မဟုတ်မိတ္တူကူးခြင်းနှစ်ဆ) ကိုရွေးချယ်ပါ။ သို့မဟုတ်ဘရောင်ဇာလိပ်စာဘားတွင် နှိပ်၍ ဖိကိုင်ထားပါ၊ မီနူးတွင်အားလုံးသို့မဟုတ်၎င်း၏အိုင်ကွန်ကိုအသာပုတ်ပါ၊ ပြီးနောက်ကူးပါသို့မဟုတ်အိုင်ကွန်ကိုအသာပုတ်ပါ။
အကယ်၍ vimeo အက်ပ်ကိုအသုံးပြုပါက၊ မျှဝေရန်ခလုတ်ကိုရှာပါ၊ ၎င်းကိုထိပုတ်ပါ၊ အဆက်အသွယ်များ၊ အီးမေးလ်များနှင့်အစောပိုင်းနည်းလမ်းများပါသောစံဝေစုခွဲတမ်းတစ်ခုပြသပါလိမ့်မည်၊ ကူးယူရန်ကလစ်နှိပ်ပါရွေးစရာကိုရှာပြီး၎င်းကိုအသာပုတ်ပါ။ ပြီးရင် browser ဆီကိုပြန်သွားပါ။
+ Vimeo ဗီဒီယိုတွေကိုအွန်လိုင်းပေါ်မှာဘယ်လိုတင်မလဲ။
⓵ Vimeo ကိုဖွင့်ပါ
သင်၏မိုဘိုင်းဘရောက်ဇာကိုဖွင့ ်၍ Vimeo ၏တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့ဝင်ပါသို့မဟုတ်သင်၏စမတ်ဖုန်းပေါ်တွင် Vimeo အပလီကေးရှင်းကိုဖွင့်ပါ။ သင်ရွေးချယ်သော Vimeo ဗီဒီယိုကိုဖွင့်ပြီးလိပ်စာကိုစနစ်တကျကူးယူပါ။
⓶ Vimeo ဗီဒီယို၏ URL ကိုကူးထည့်ပါ
ယခု FBION ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့သွားပြီးထိုလိပ်စာကိုကျွန်ုပ်တို့၏ Vimeo Video Downloader ထဲသို့ကူးထည့်ပါ။ ယခုဒေါင်းလုပ်စတင်ရန် download option ကိုနှိပ်ပါ။
ဗီဒီယိုအရည်အသွေးကိုရွေးချယ်ပြီး Download ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါပြီးနောက်သင် download လုပ်သည့်ဖိုင်အရွယ်အစားပေါ် မူတည်၍ ဗီဒီယိုကိုမိနစ်အနည်းငယ်အကြာတွင် download လုပ်ပါ။
⓸ သင်၏ Android / iOS တွင်နောက်မှကြည့်ပါ
သင်၏မိုဘိုင်း၏ download ကဏ္sectionမှသင်၏ Vimeo ဗီဒီယိုကိုအင်တာနက်နှင့်ချိတ်ဆက်စရာမလိုဘဲ download လုပ်ထားသော Vimeo ဗီဒီယိုကိုရယူပါ။
Vimeo ဗီဒီယိုကို iPhone ထဲသို့မည်သို့ဒေါင်းလုပ်လုပ်ရမည်နည်း။
Vimeo ဗီဒီယိုကိုကျွန်ုပ်၏ဖုန်းသို့မည်သို့ download လုပ်ရမည်နည်း။
+ အဘယ်ကြောင့်ကျွန်ုပ်၏ဗွီဒီယိုသည်အသံအဖြစ်ပြသသနည်း။ ပုံဘယ်မှာလဲ။
ရှေ့ကိုသွား၊ ဒေါင်းလုပ်လုပ်ပါ။ ဗီဒီယိုပဲ! သို့သော်သင်၏အင်တာနက်ဘရောက်ဇာကထိုအရာကိုမမြင်နိုင်သဖြင့်၎င်းသည်ဗီဒီယိုကိုအသံအဖြစ်ကိုယ်စားပြုသည်။
ကြည့်ပါ၊ ပြimeနာတစ်ခုမှာ Vimeo သည်တစ်ခါတစ်ရံ၌ဗွီဒီယိုများကို HEVC format ဖြင့်ကမ်းလှမ်းသည်၊ (chrome နှင့် firefox အပါအ ၀ င်) browser အများစုသည်မဖွင့်နိုင်ပါ။ တကယ်တော့ Safari ကသာဒီဗီဒီယိုကိုကောင်းကောင်းကစားနိုင်တယ်။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေဘရောင်ဇာသည်၎င်းဖိုင်ကိုဗွီဒီယိုကဲ့သို့မဖွင့်နိုင်ပါက VLC သို့မဟုတ် KMP တို့ကဲ့သို့သင်၏သာမန်ဗီဒီယိုဖွင့်စက်တွင်ပြproblemsနာမရှိပါ။ HEVC format သည်အရည်အသွေးကျဆင်းမှုမရှိဘဲ data size ကိုအနည်းငယ်သက်သာစေသည်။ ၎င်းသည်လက်ရှိကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုသော AVC format ၏နောက်ဆက်တွဲဖြစ်နိုင်သည်။ သို့သော်၎င်းသည်အနာဂတ်တွင်ဖြစ်သည်။
ဒါကြောင့်ယခုတွင်ကျွန်ုပ်ကိုယုံယုံကြည်ကြည်၊ ဗွီဒီယိုဖိုင်ကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြီးသင်၏စက်ပေါ်တွင်ကစားရန်ကြိုးစားပါ။ သငျသညျအကြှနျုပျကိုမယုံသေးလျှင်, Safari ကို install, တူညီသော vimeo link ကို run နှင့် Safari က Chrome ကိုသို့မဟုတ် Firefox မရနိုငျသောဗီဒီယိုကိုမည်သို့ကောင်းမွန်စွာဖွင့်သည်ကိုကြည့်ပါ။ အမှန်မှာ၊ Safari, IE နှင့် Edge သာ HEVC video format ကိုဖွင့်နိုင်သည်ကိုဤနေရာတွင်ပြထားသည်။
+ ဗွီဒီယိုသည် download မလုပ်ဘဲ streaming အစားစတင်သည်ဆိုပါစို့။
ဗွီဒီယိုပေါ်တွင် Right Click နှိပ်၍ Save Video / Link As; လက်ကိုင်ဖုန်းအတွက်ဗွီဒီယိုကိုအသာပုတ်။ ကိုင်ထားပါ၊ မီနူးပေါ်လာသည့်အခါ Save Link ကိုရွေးပါ။
အကယ်၍ သင်သည် MacOS, iPhones နှင့် iPads ပါသော IOS ကဲ့သို့သော Apple ထုတ်ကုန်များအနက်တစ်ခုဖြစ်သည်ဆိုလျှင်ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်တင်စရာမလိုပါ။ Apple ကသာမန် mp3 နှင့်ဗွီဒီယိုများကို browser များမှတားမြစ်ပြီး iTunes ကိုနေရာတွင်ထားရန်ကြိုးစားသည်။ ကအားလုံးကို။ ပြီးတော့အက်ပဲလ်ရဲ့ဆန္ဒနဲ့တောင်မှဖိုင်တွေကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်နိုင်တဲ့အထူးအက်ပလီကေးရှင်းတွေ (browsers) တွေလိုအပ်တယ်။
+ Embedded private Vimeo ဗီဒီယိုကိုကျွန်ုပ်မည်သို့ download လုပ်ရမည်နည်း။
လျှို့ဝှက် Vimeo ဗွီဒီယိုသည် RTMP ပရိုတိုကောကိုအခြေခံထားသည့်အတွက် Safari သာလျှင်ဤကဲ့သို့သောဗွီဒီယိုများကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်အထောက်အကူပြုသည်။ အကယ်၍ Vimeo မှပိုမိုသောဗီဒီယိုများကိုသင် download လုပ်လိုပါက download helper ကိုသုံးနိုင်သည်။
အလားတူမေးခွန်းများ: Vimeo တွင်သီးသန့်ဗီဒီယိုတစ်ခုကိုကျွန်ုပ် download လုပ်လို့ရပါသလား။
+ Vimeo Video Downloader သည်မည်သို့အလုပ်လုပ်သနည်း။
၎င်းသည်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏စက်များမှတဆင့် link ကိုဝင်ရောက်ခြင်းအားဖြင့်မည်သည့်အသုံးပြုသူကိုမှဝင်ရောက်ခြင်းမပြုဘဲအလုပ်လုပ်သည်။ အကယ်၍ ဗွီဒီယိုသည်အများပြည်သူအတွက်လက်လှမ်းမမှီပါက၎င်းကိုဒေါင်းလုပ် လုပ်၍ မရပါ။ ဗွီဒီယိုသည်ကူးယူနိုင်ပြီးဒေါင်းလုပ်လုပ်နိုင်သည်ကိုတွေ့ရှိသောအခါမည်သည့်အရည်အသွေးများကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲယူနိုင်သည်ကိုရွေးချယ်သည်နှင့်အသုံးပြုသူမှမည်သည့် resolution ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲယူလိုသည်ကိုရွေးချယ်ရန်ရွေးချယ်မှုတစ်ခုကိုပြသည်။
+ အော့ဖ်လိုင်းကြည့်ရှုရန် Vimeo ဗွီဒီယိုများကိုမည်သို့ download လုပ်ရမည်နည်း။
ဗွီဒီယိုအတွက်ဒေါင်းလုပ်လုပ်လို့ရပြီဆိုလျှင် Download ဆိုသည့်ဗီဒီယိုဖော်ပြချက်အောက်ရှိခလုတ်ကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။ ဒီ download ခလုတ်ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ဗွီဒီယိုဟာသင့်ကွန်ပျူတာထဲမှာစတင်ပြီးဗီဒီယိုတွေကိုအော့ဖ်လိုင်းမှာပျော်မွေ့လိမ့်မယ်။
+ Vimeo အခမဲ့လား။
Vimeo တွင်အသင်း ၀ င်ရွေးချယ်မှု ၄ ခုရှိသည်။ Plus, PRO နှင့် Business, Premium ။ တစ်ခုချင်းစီတွင်သိုလှောင်မှုနှင့်ပံ့ပိုးမှုအဆင့်အမျိုးမျိုးရှိသည်။ သင်အောက်ပါဇယားတွင်တွေ့နိုင်သည်။ Vimeo တွင်အခမဲ့အသင်း ၀ င်သော်လည်းအခမဲ့တစ်ပတ်လျှင် ၅၀၀ MB အထိသိုလှောင်နိုင်သည်။
+ Vimeo မှဗွီဒီယိုများကိုမည်သို့ download လုပ်ရမည်နည်း။
သင်ကူးယူလိုသောဗီဒီယို၏ URL ကိုကူးယူပြီးထိပ်ရှိဘားတွင်ကူးထည့်ပါ။ ထို့နောက်ထိုဘား၏ညာဘက်ရှိ Download ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။ ၎င်းသည်စက္ကန့်အနည်းငယ်အတွင်း load လုပ်လိမ့်မည်။ ထို့နောက် FLV (Flash), MP4 သို့မဟုတ် WebM format ဖြင့်ဗွီဒီယိုကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်သင်ရွေးစရာရှိသည်။
+ Vimeo ဗွီဒီယိုများကိုမည်သို့အခမဲ့ download ရယူနိုင်သနည်း။
ရုပ်ရှင်တွေဘယ်မှာအခမဲ့ download လုပ်နိုင်ပါသလဲ။
FBION ကွန်ရက်စာမျက်နှာကိုဖွင့်ပါ၊ Vimeo ဗွီဒီယို၏ URL ကိုရိုက်ထည့်ပြီး Download ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။ ရရှိနိုင်သည့်လင့်ခ်အားလုံး၏စာရင်းကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။ အမျိုးအစားနှင့်အရည်အသွေးကိုရွေးပြီးဗီဒီယိုများကိုအော့ဖ်လိုင်းတွင်နှစ်သက်ပါ။
+ Vimeo ကိုဝယ်ယူနိုင်ပါသလား။
၀ က်ဘ်ဆိုက်၏ On Demand ကဏ္inတွင် ၀ ယ်ယူရန်သို့မဟုတ်ငှားရမ်းရန်ရှိသော Vimeo ဗွီဒီယိုများကိုသင် download ပြုလုပ်၍ မရပါ။ ကြည့်ရှုနိုင်မည့်အခမဲ့ဗီဒီယိုများကိုသင် download လုပ်နိုင်သည်။ ဗွီဒီယိုများကြည့်ရှုရန်သင့်တွင်အကောင့်မရှိပါ။ သို့သော်သင့်တွင် Plus သို့မဟုတ် PRO Vimeo အကောင့်တစ်ခုရှိပါကရရှိနိုင်သည့်အခါအရင်းအမြစ်ဖိုင်များကိုကူးယူနိုင်လိမ့်မည်။
+ Vimeo တွင် download ပြုလုပ်ရန်မည်သို့လုပ်ဆောင်ရမည်နည်း။
ထို့အပြင် Pro, Business နှင့် Premium အသင်းဝင်များသည်၎င်းတို့၏ဗီဒီယိုများကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်ရွေးချယ်ခွင့်ရှိသည်။ သင့်တွင် Basic အသင်း ၀ င်မှုရှိပြီးသင်၏အကောင့်ကိုအဆင့်မြှင့်ပါက download လုပ်ရန်အတွက်ရွေးချယ်မှုသည်အလိုအလျောက်ဖွင့်လိမ့်မည်။
ဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်ဗွီဒီယိုများ၏ရရှိနိုင်မှုသည်ဗွီဒီယိုဖန်တီးသူ၏ subscription level အပေါ်မူတည်သည်။ အခြေခံအဖွဲ့ဝင်များသည်သူတို့၏ဗွီဒီယိုများကိုဒေါင်းလုပ် ချ၍ မရပါ။ သို့သော်၊ အကယ်၍ ဗီဒီယိုသည် Plus, Pro သို့မဟုတ် Business အသင်း ၀ င်ပါက၎င်းတို့သည် download option တွင်ပြောင်းလဲရန်ရွေးချယ်စရာရှိသည်။
+ Vimeo ကဘယ်လောက်ကျပါသလဲ
Basic မှသိုလှောင်မှုကိုအနည်းငယ်တိုးမြှင့်ပေးသော Vimeo Plus အသင်း ၀ င်သည်သုံးစွဲသူများကိုတစ်လလျှင် ၇ ဒေါ်လာကုန်ကျမည်ဖြစ်ပြီး၎င်းသည်သင်၏ပိုက်ဆံအိတ်အတွက်ကြီးမားသောထိခိုက်မှုမဟုတ်ပါ။ သို့သော် PRO အသင်းဝင်သည်သိုလှောင်မှုနှင့် HD ပြန်ဖွင့်ခြင်းများများစွာရှိသည့်တိုင် WallT တွင်ထုပ်ပိုးထားသည်။ တစ်လလျှင်ဒေါ်လာ ၂၀ နှုန်းဖြင့်တစ်နှစ်ဒေါ်လာ ၃ ဒေါ်လာအထိ ၃ ဒေါ်လာအထိ ၃ လအထိဒေါ်လာ ၃၈ ဒေါ်လာဖြစ်သည်။
+ Vimeo ကဝယ်လိုအားဘယ်လောက်ကျပါသလဲ
ရောင်းရန်စတင်ရန် Vimeo PRO သို့နှစ်စဉ်ဒေါ်လာ ၂၀ နှုန်းသာပါ ၀ င်ပါ။ ရက် ၃၀ လုံးလုံးအန္တရာယ်ကင်းကင်းစမ်းကြည့်ပါ။ ငွေပေးငွေယူကုန်ကျစရိတ်ပြီးနောက်အိမ်ပြန်ဝင်ငွေ 90% ကိုယူပါ။ ငှားရမ်းခ၊ ၀ ယ်ပါ၊ စာရင်းသွင်းပါ။
+ Mac အတွက် Vimeo ဗွီဒီယိုကူးယူနည်းကိုမည်သို့ရွေးချယ်ရမည်နည်း။
+ Vimeo ဗီဒီယိုတွေကိုမင်းပြခန်းထဲဘယ်လိုသိမ်းမလဲ။
ဗွီဒီယိုအား download လုပ်ပြီးပါကသင်၏ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုသင်၏ကွန်ပျူတာရှိ Downloads ဖိုင်တွဲမှ iTunes သို့မဟုတ် Android သို့မဟုတ် iPhone ကဲ့သို့သောအခြားကိရိယာသို့ဆွဲယူပါ။ ယခု Vimeo ဗီဒီယိုကိုသင်၏မိုဘိုင်းပြခန်းတွင်သိမ်းဆည်းလိမ့်မည်။
ဤကိရိယာဖြင့်အဆုံးမဲ့ Vimeo ဗွီဒီယိုရင်းမြစ်များနီးကပ်နေပြီ။ သင်လုပ်ရန်လိုအပ်သမျှမှာ Vimeo ဗီဒီယို URL လိပ်စာကိုကူးယူပြီး၎င်းကိုသတ်မှတ်ထားသောနေရာတွင်ထည့်ပြီး Download ကိုနှိပ်ပါ။ ခဏတာမှသာ Vimeo downloader သည်ဗီဒီယိုအားအလိုအလျောက်ရှာဖွေပြီးသင့်အတွက် download link များကိုထုတ်ပေးလိမ့်မည်။ Vimeo ဗွီဒီယိုကိုအခမဲ့ download လုပ်ရန်အလွန်လွယ်ကူသည်။
Vimeo မှဗီဒီယိုများကူးယူရန်ဒီ site ကအကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကိုပေးသည်။ ဗီဒီယို URL ကိုရိုက်ထည့်ပြီး Download ကိုနှိပ်ပါ။ ထို့နောက်အားလုံးအဆင်ပြေသွားသည်။ အံ့သြစရာပါပဲ
ဘဏ္Advာရေးအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်, Fort Walton Beach
၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အသုံးပြုခဲ့သမျှတွင်အကောင်းဆုံး Vimeo Downloader ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်အကြိုက်ဆုံးဗီဒီယိုအားလုံးကိုကွန်ပျူတာထဲသို့အကန့်အသတ်မရှိသိမ်းထားနိုင်သည်။ သင်၏ကြီးသောအလုပ်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ကွန်ပျူတာပံ့ပိုးမှုအထူးကု, Old Saybrook
ဗွီဒီယိုများကိုဒေါင်းလုတ်လုပ်ခြင်းသည်ဘယ်တော့မှမလွယ်ကူသောကြောင့်မည်သည့်နေရာတွင်မဆိုမှတ်ပုံတင်ခြင်းမပြုဘဲသင် Vimeo ဗီဒီယိုကိုဖမ်းယူနိုင်သည် ကျွန်တော့်အကြိုက်ဆုံးဗီဒီယိုကိုမိနစ်အနည်းငယ်မျှဒေါင်းလုပ်လုပ်မိလို့အံ့သြမိပါတယ်။
မကြာသေးမီကကျွန်ုပ်သည် Vimeo ဗီဒီယိုတစ်ခုကိုကူးယူပြီးမိနစ်အနည်းငယ်အကြာတွင် download ပြုလုပ်သည်။ ငါမယုံနိုင်လောက်တဲ့မြန်နှုန်းကိုတကယ်အံ့အားသင့်မိတယ် ၎င်းသည်ပြီးပြည့်စုံသော Vimeo Video Downloader ဖြစ်သည်။
Software ရေးဆွဲသူ, Chattanooga
Vimeo Video Downloader သည်ကောင်းမွန်သောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်ပြီးကတိပေးသည်။ ၎င်းသည် Vimeo ဗွီဒီယိုများကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်အကောင်းဆုံးသောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ လူတိုင်းအားဤကိရိယာကိုကျွန်ုပ်အကြံပြုလိုပါသည်။
ငါ Vimeo ဗီဒီယို Downloader နှင့်အတူအတော်လေးသဘောကျမိပါတယ်။ စင်စစ်အားဖြင့်၎င်းသည်လုံးဝတီထွင်ဆန်းသစ်မှုရှိပြီးအင်တာနက်ပေါ်ရှိအခြားဒေါင်းလုပ်သမားများထက်သာသည်။
ဒါကလုံးဝကြီးပါတယ်။ ကူးယူရန်မလိုအပ်ပါ။ URL ကိုကူးယူပြီးကူးထည့်ရုံသာသင်ခဏ Vimeo ဗီဒီယိုများရရှိလိမ့်မည်။ ထို့အပြင်လူကြိုက်များသောဗွီဒီယိုဆိုဒ်အချို့ကိုလည်းကောင်းစွာထောက်ပံ့ထားသည်။ ငါ့အဘို့ကြီးစွာသောအတွေ့အကြုံနှင့်မရှိတော့နှောင့်အယှက်!
တစ် ဦး ကအလွန်ကြီးစွာသောအခမဲ့ထုတ်ကုန်! အွန်လိုင်းဗီဒီယိုများကိုအော့ဖ်လိုင်းတွင်အော့ဖ်လိုင်းကြည့်လိုသူများအတွက်သို့မဟုတ်နောက်မှကြည့်ရှုရန်အတွက်မဖြစ်မနေလိုအပ်သည်။ ဗီဒီယိုများကူးယူရန်လွယ်ကူ၊
Vimeo ဗီဒီယိုများကို MP4 တွင်အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးဖြင့်ဒေါင်းလုပ်လုပ်ပါ 2021
သီးသန့် Facebook ဗွီဒီယိုများကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ပါ
သင်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏သတင်းလွှာကိုစာရင်းသွင်းပြီးသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်ဤ ၀ က်ဘ်ဆိုက်၏နောက်ဆုံးသတင်းများနှင့်အင်္ဂါရပ်များ၏အချက်အလက်များကိုသင်ရရှိနိုင်ပါသည်။
QR ကုဒ် findmyfbid savefrom odownloader bitdownloader keepvid
အကွောငျး TOS ကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒ ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ Sitemap
➴ ရှာပါ Facebook ID